नब्बे दशकको नेपाली पप :: Setopati
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २२
हामी इस्वी सम्बत् सत्तरीको दशकमा जन्मेकाहरू वैज्ञानिक प्रयोगका साक्षी बन्यौं। यसको रफ्तारसँगै दौडियौं। हामीले तय गरेका अनेक समानान्तर यात्रामध्ये आज म सञ्चार क्षेत्र, खासगरी रेडियो, टिभी र त्यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हाम्रो जमानाका केही सांगीतिक कोसेलीहरू सम्झने प्रयास गर्दैछु।
त्यस बेलाका प्राय: गीत रेडियो नेपालकै स्टुडियोमा रेकर्ड हुन्थे। रेडियोमा पहुँच नभएका र रेडियोका हाकिमको रोजाइमा नपर्ने कलाकारहरू गाउने सोखबाट सदाका लागि वञ्चितझैं हुन्थे। आधुनिक र लोकगीतको एकछत्र चलेको त्यो समय पश्चिमा प्रभावका गीत सिर्जना नभएका होइनन्। हङकङको लाहुरे समाजमा सुरू भएको हिमालयन ब्यान्डका गीतहरू गाजलुले आँखै छोप्ने, मुसुमुसु हाँसी देऊ न लै लै, कहाँ तिम्रो मायालुलाई ... खुबै चर्चित थिए।
नेपालमै प्रकाश गुरुङको संगीत र ओमविक्रम विष्टको स्वरमा सुनचाँदी भन्दा, जोबन त्यसै बितिजाला, म सम्झन्थेँ, मेरो रहर बिउँझिएर ... आदिले पनि आफ्नो समयमा तहल्का पिटे। त्यसैताका सुक्मित गुरुङले केही गीत ओमविक्रम विष्टसँग र पछि दिपक थापाको संगीतमा ओ मेरो प्रियतम गाएर आफ्नो पहिचान जमाएकी थिइन्।
असीको दशकमा काठमाडौंमा सांगीतिक ब्यान्ड खुल्ने चलनले तीव्रता लियो। प्राय: सबै अंग्रेजी गीत सुन्थे र बजाउँथे। त्योभन्दा पहिले दार्जिलिङ, कलकत्ताबाट यहाँ पाँचतारे होटलमा बजाउन आउने 'प्रिज्म' जस्ता ब्यान्ड नभएका होइनन्।
काठमाडौंकै केटाहरूले खोलेका केही ब्यान्डले भने नेपाली संगीतमा दुरगामी प्रभाव पार्यो। तीमध्ये एलिगेंस, ब्लैंड फेथ, काठमान्डू क्याट्स, ब्रदरहुड, साउन्डमिल, क्रिसक्रस, र्याथचाइल्ड प्रमुख हुन्। यी ब्यान्डहरू अंग्रेजी गीत राम्रो बजाउँथे। तर, यिनका सदस्य नेपाली गीतलाई खिसिट्यूरी गर्थे। यिनीहरू प्राय: डिप पर्पल, डायर स्ट्रेट्स, लेड जाप्लिन, पिंक फ्ल्योइड लगायतका रक गीत गाउन रुचाउँथे। यी ब्यान्डमा भएका अधिकांश संगीतकर्मी अहिले संगीतबाट टाढा छन्। एलिगेंसका मुक्ति शाक्य, ब्लैंड फेथका ज्योति घिमिरे, साउन्डमिलका ध्रुव लामा लगायत केही भने अहिले पनि नेपाली संगीत क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।
नब्बे दशकको प्रारम्भसँगै 'अंग्रेजी शैली' मा नेपाली गीत गाउने क्रमले तीव्रता पायो। युवा जमातमा नेपाली भाषाको पप गीतको टक बस्न थाल्यो। भीम तुलाधर, हरिश माथेमाहरू यो क्रममा अगाडि थिए। विस्तारै अंग्रेजी गीत गाउने सुनिल उप्रेतीहरू पनि नेपाली गीतमा झुम्न थाले। त्यसताका भीम तुलाधरको अंगालो अंगालोमा, हरिश माथेमाको स्वप्निल रंगमा, सुनिल उप्रेतीको सागरझैं गहिरो र सलल बग्ने खोला चर्चित थियो।
त्यसैताका सञ्जय श्रेष्ठको 'क्रसरोड' भन्ने ब्यान्ड आयो, जसको गीत माया मेरी माया ले लोकप्रियताको शिखर चुम्यो। त्यसपछि नेपाली गीतको एल्बम निस्कने लर्को चल्यो। सञ्जीव प्रधानको नशाभित्र नशा र बबिन प्रधानको झरी परेको दिन सबै सुपरहिट भए।
त्यही समयको कुरा हो, कहाँ तिम्रो मायालुलाई भन्ने गीतको कभर गाउँदै टिभीको पर्दामा एउटा समूह देखा पर्यो। आफूलाई 'प्रतिविम्ब' भन्ने त्यस समूहले गाएको रित्तो सडकमा भन्ने गीत पनि पृथक सुनिन्थ्यो। त्यही समूहका राजु सिंह अहिले पनि सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय छन्।
'लिटलन्स' भन्ने ब्यान्डको काली काली हिस्सी परेकी, धिरज राईको लुकी लुकी पनि राम्रै रुचाइए।
युवा जमातमा पपगीतको लोकप्रियता स्थापित भइरहेको थियो, तर ती गीतमा नेपाली मौलिकपनको स्वाद कम हुन्थे। त्यसैताका अर्को एउटा ब्यान्ड झुल्कियो, जसले नेपालीपन र नेपाली लोकस्वाद दुवैलाई नेपाली पपमा मिसाएर पस्क्यो। त्यो ब्यान्ड थियो, 'नेपथ्य', जसको आँगनैभरि, बर्सातको मौसम, छेक्यो छेक्यो, हिमाल चुचुरे, जोमसोमे बजारमा ... लगायत गीत खुब हिट भए। नेपथ्यको सुरुआती पहिचान क्यासेट बिक्रीबाट भए पनि यसको व्यापकताको जस नेपाल टेलिभिजनलाई नै जान्छ।
माथि उल्लिखित ब्यान्ड र गायकहरूले गीत रेकर्ड गराउनु र क्यासेट बेच्नुभन्दा पहिले नै एक जना गायकको एल्बम 'सुनसान रातमा' निकै चलेको थियो। त्यसै एल्बममा रहेको आकासैमा चिल उड्यो धरतीमा छाया जस्ता चर्चित गीत गाउने गायक थिए, सुनिल पराजुली। उनले यो एल्बम किशोर गुरु‍ङसँगको सहकार्यमा रेकर्ड गरेर सन् १९८६ मा सार्वजनिक गरेका थिए। नब्बे दशकमा नेपाली बजारमा पपगीत लोकप्रिय हुन थालेपछि त्यसको ब्याज खाने बेला उनी त्यति सक्रिय देखिएनन्। पछि १९९९ मा 'आउ' नामक एल्बम लिएर आए, जुन त्यति चर्चित भएन।
किशोर गुरुङले यो एल्बममा संगीत संयोजन गरेको एक दशकजति पछि दार्जिलिङका एक गायकको एल्बममा काम गरे। सुरेश कुमारको 'लव सङ्ग्स' नाम रहेको त्यो एल्बमका सबै गीत राम्रा र केही निकै चर्चित रह्यो- प्रिय तिम्रो नशालु आँखाले, यो जुनीमा तिमीलाई पाउन नसके...
हुन त त्यसअघि रेडियो नेपालबाट लोकप्रिय भएका थुप्रै कलाकार थिए। त्यसताका गीत सुन्ने सीमित मध्यम थिए। गीतहरूलाई कि रेडियो नेपालले 'ब्रोडकास्ट' गर्थ्यो, कि दशरथ रंगशालामा हुने फुटबलको हाल्फटाइममा त्यहाँका लाउडस्पिकरले 'न्यारोकास्ट'। रंगशालामा बज्ने गीतमा नारायण गोपाल, प्रेमध्वज, दीपक खरेल मुख्य रोजाइका हुन्थे। केही घरमा क्यासेट प्लेयर भए पनि नेपाली गीतको क्यासेट चक्का पाइन्न थियो। टुइनवान प्लेयर (रेडियो र क्यासेट एउटैमा बज्ने) भएकाहरूले मन परेका गीत रेडियोको फर्माइसी कार्यक्रमबाट कुरेर रेकर्ड गर्थे र पछि सुन्थे।
अग्रज पुस्ताका सबै कलाकारलाई प्रवर्द्धन गरेको जस रेडियो नेपाललाई नै जान्छ। नेपाल टेलिभिजनको लोकप्रियतापछि भने कलाकार प्रवर्द्धन र स्थापित गर्ने शक्ति टेलिभिजनतिर सर्यो। त्यसपछि धेरैले गुनासो गरेको सुनिन्थ्यो, 'अचेल सुन्ने होइन, हेर्ने गीतको चलन छ।'
टिभीमा सरेको यो शक्तिको केही हिस्सा सन् १९९५ मा सुरू भएको रेडियो नेपालको एफएम प्रसारणले लग्यो। अहिलेका बग्रेल्ती एफएम सुरू हुनुअघि रेडियो नेपालकै स्टुडियोबाट एफएम १०० प्रसारण हुन्थ्यो। त्यसैमा बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म विभिन्न कम्पनीहरूले समय भाडामा लिन्थे। हिट्स, क्लासिक, कान्तिपुर लगायतले आफूले किनेको समयमा आफ्नो कार्यक्रम चलाउँथे। समय सकिएपछि पोको कसेर जान्थे। एफएमको लोकप्रियता यस्तो थियो, रेडियोमा बोल्ने प्राय: 'आरजे' सेलेब्रेटी थिए।
एफएम युगमा चर्चित भएका कलाकारको सूची लामै छ। सुरुमा 'स्टिल ह्विल्स' ब्यान्डको नामबाट बज्ने आँखामा तिमीलाई गीत चर्चित भएपछि अरू गीत नविन भट्टराईको नाममा आउन थाल्यो- साँझ पख, रात बित्यो हेर तिमीलाई सम्झेर ...।
'इन्फर्नल्स' ब्यान्डको नाममा बज्ने शुभकामना भन्ने गीत चलेपछि अरू गीत दिपेशकिशोर भट्टराईको नाममा आउन थाल्यो- मलाई माफ गरिदेऊ, होश हराए पनि मायालु ...।
'१९७४ एडी' को मायालुले गीत भएको एल्बम हिट्स एफएमले प्रचार गरेपछि यो ब्यान्ड लोकप्रिय हुँदै गयो। पछि परेली, सम्बोधन, यो मन त मेरो नेपाली हो जस्ता गीतहरूले ‘१९७४ एडी’ लाई लोकप्रियताको शिखरमा पुर्यायो। काली कालीबाट हिट भएको 'लिटलन्स' ब्यान्डका दीपक बज्राचार्यको माइतीघर, ओ अमिरा गीत एफएममा बजेपछि फेरि चर्चित हुन थाल्यो। ‘भेडेटार’ नामक एल्बम निकालिसकेका जेम्स प्रधान भैगो उनी जाऊन गीत एफएममा बजेपछि चर्चामा आए। त्यस्तै, जति हेर्यो गीतले मोहन भुसाललाई चर्चित बनायो। १५-१६ वर्षकै हुँदा तिम्रो अधर भन्ने गीतबाट चर्चा बटुलेकी नलिना चित्रकारको गीत एफएममा पुनः बज्न थालेपछि उनको सांगीतिक सक्रियता बढ्यो।
तिम्रो अधर का संगीतकार प्रवेशमान शाक्य र उनका भाइ पवित्रमान गायकका रूपमा पनि चर्चित थिए। उनी त्यस बेलाका चर्चित क्यासेट पसलमध्येको 'मेलोडी टाइम्स' पनि चलाउँथे। त्यसताका नेपाली गीतको क्यासेटका लागि म जाने पसलमा असनको अन्नपूर्ण क्यासेट, न्यूरोडको टिक एन टक, सुवाल र मेलोडी टाइम्स मुख्य थिए।
प्रवेशको त्यसताकाको चर्चित गीत थियो– तिमीसामु नभएर टाढा हुँदा। यो गीत टिभी र एफएममा खुब बज्यो। यी गीतभन्दा अलि अगाडि टिभीमा निकै बज्ने गीतमा नागेन्द्र श्रेष्ठ र मिलन चक्खुको चाँदनीमा बग्छ खोलो र देविका प्रधानको यस्तै रहेछ यहाँको चलन, मदनसिं नेपाली र सुक्मित गुरुङको यो हावा यो लहर... रेलिमाई रेलिमाई आदि पर्छन्।
यता एफएमको लोकप्रियता बढ्दै गयो, उता टेलिभिजनमा पनि रोशन प्रतापसँगै म्युजिक भिडियो बनाउने दुई टोली सक्रिय हुन थाले। नारायण श्रेष्ठ, सहजमान लगायतको 'टिम वान' र भुषण दाहाल लगायतको बिहानी प्रसारण टिम। यो समय नेपाल टेलिभिजनमा धेरै राम्रा म्युजिक भिडिओहरू बने। योगेश्वर अमात्यको जब सन्ध्या हुन्छ, बिधान श्रेष्ठको बुहारी झारझैं लजालु का भिडिओले यी दुवै कलाकारलाई चिनायो र चर्चित बनायो। सुरूमा 'रक योगिज' ब्यान्डका गायक योगेश्वर अमात्य पनि पछि 'सोलो' गाउन थाले।
गीत हिट हुन रेडियो र टिभी दुवैको समान भूमिका हुन्थ्यो। पछि निजी टेलिभिजनका रूपमा इमेज च्यानल सुरू भयो। इमेजमा कार्यरत तीन भिडियो मेकरले बनाएका तीन कलाकारका तीनथरी भिडिओले ती तीनै जनालाई कलाकार स्थापित त गर्यो नै, म्युजिक भिडियो विधालाई नै सिर्जनात्मक हिसाबले परिस्कृत पार्यो। ती तीन गीत हुन्:
भुषण दाहालले बनाएको निमा रुम्बाको ब्लक हिल सुज, सहेन्द्र श्रेष्ठले बनाएको 'कबवेब' को मर्सिडिज बेन्ज र आलोक नेम्वाङले बनाएको राजन ईशानको वशमा छैन मेरो मन।
टिभीभन्दा बाहिर ‘म्युजिक नेपाल’ ले एफएम र एनटिभीमा समय किनेर आफ्ना उत्पादनहरू प्रचार गर्थ्यो। त्यसको निर्माण जिम्मा टिभी र नेपाली सिने जगतमा आफ्नो पहिचान बनाएका ब्रजेश खनालले सम्हालेका थिए। त्यसै दौरान ब्रजेशले पनि म्युजिक भिडियोहरू बनाए। त्यसैगरी सिनेमा जगतका राजेन्द्र सलभले पनि ‘मास्टर रेकर्डिङ’ का लागि थुप्रै भिडियो बनाए।
त्यही क्रममा धेरै नयाँ कलाकार र ब्यान्ड आए, गए। केही अझै छन्। लोकलयमा आधारित गीत गाउने 'नेपथ्य', लेककी हे मायाबाट कन्दरा, ढुंगेसाँघुको मेलैमा बाट देउराली ब्यान्ड, ऐंसेलुको पातबाट ग्लुमी गाइज, डाँडैमा मेला लागेछ बाट स्काई ब्यान्ड, बस सुन्दरी बाट ब्रोसिस, उँभो उँभो खासा र नतानु त तानु लाग्ने बाट मंगोलियन हार्टस् चर्चित भए। सँगसँगै हेटौंडाका केटाहरू बड्स ब्यान्डले पनि केही पहिचान बनाएको थियो। उनीहरूको गीत बिर्सन सक्दिन चलेको थियो। पछि हेटौंडाकै 'सिजन्स' ब्यान्ड आयो। असार साउन लगायत गीतबाट सम्भावना देखाएको यो ब्यान्ड पनि लामो टिकेन। माथि उल्लिखितमध्ये प्राय: ब्यान्ड निष्क्रिय भइसके।
यी ब्यान्डको नाम लिँदा अरू केही नाम र सन्दर्भ उल्लेख नगरे अधुरो रहन्छ। नेपथ्यले गाएको चरी मर्यो सिसै नेपथ्यले भन्दा पहिले कार्यक्रममा नमस्ते ब्यान्डले बजाउँथ्यो। यो लोकगीत धेरैअघि रेडियो नेपालमा पाल्पाको देउराली समूहले रेकर्ड गरेको थियो। त्यो गीत चर्चित पनि थियो। यस लोकगीतलाई ‘नमस्ते’ ले रेगी प्याट्रनमा ढालेर गायो, पछि त्यसैलाई नेपथ्यले देउराली समूहका भरत देउरालीको स्वीकृतिमा रेकर्ड गर्यो र उनीहरूको सर्वाधिक बिक्री भएको एल्बम 'मीनपचास' मा समेट्यो। त्यस एल्बमको यो गीत र जोमसोमे बजारमा सुपरहिट भए।
त्यही रेगे प्याट्रनको अनुसरण हुँदै ‘स्याड रोज’ भन्ने ब्यान्डले चरी उड्यो बादल छुनलाई गायो र चर्चित भयो। दुर्भायवश, ‘स्याड रोज’ पनि त्यसताका चलेको रोग ‘वान संग वन्डर’ को शिकार भयो। त्यस्तै, अलि अघिको ‘वान सङ वन्डर’ ब्यान्ड थियो शिबिरा, जसको एउटा गीत सुपरहिट भयो– लालुपाते फुल्यो वनैमा ...। ‘
वान संग वन्डर’ रोगको शिकार ‘कलिंद’ भन्ने ब्यान्ड पनि भयो। यिनको लजालु मुस्कानले प्रियसी चर्चित भयो, तर त्यसपछि यो ब्यान्ड त्यति सक्रिय देखिएन।
पुराना चर्चित गीतलाई ‘रिमिक्स’ गरेर गाउने, रेकर्ड गराउने चलन पनि व्याप्त थियो। धेरै कलाकारले यसलाई पुरानो लोकप्रियतामा टेकेर आफ्नो पहिचानको सजिलो खुड्किलोका रूपमा पनि प्रयोग गरे। केहीले पुरानाप्रतिको सम्मानका रूपमा गाए। यसरी पुराना गीत आफ्नो ढंगमा गाएर सम्मान अर्पण गरेको महशुस हुने केही गीत यी हुन्, नेपथ्यले गाएको देउराली समूहको चरी मर्यो, रक योगिजले गाएको लेकाली समूहको लहरा पहरा छहराको देश, रबिन एन्ड लुजाले गाएको डेनी डेन्जोङ्पाको चिसो चिसो हावामा, दिपेश किशोरले गाएको गोपाल योञ्जन/नारायण गोपालको मलाई माफ गरिदेऊ।
यो सूची लामै हुनसक्छ, तर मलाई त्यसबेला राम्रा लाग्ने र अहिलेसम्म याद भएकामध्ये केही उल्लेख गरेको हुँ।
त्यसैताका एउटा नौलो प्रयोगसँगै काठमाडौंका पवित्र कसा: लगायतको टोलीले ‘नेवा बिटल्स’ नामको एल्बम निकाल्यो। विश्वविख्यात बेलायती ब्यान्ड बिटल्सका संसारभरिका फ्यानले आफ्नो भाषामा बिटल्सका गीत गाउने चलनअनुरुप पवित्र र साथीहरूले बिटल्सका गीत नेवारीमा उल्था गरी पूरै एल्बम निकाले। यो पनि त्यस बेलाको रमाइलो स्मरणयोग्य प्रयोग थियो। हिसि दुम यम हाकु मैचा... बाँला बाँला बाँला बाँला...
मेरो यो लेखको आसय सञ्चारमाध्यमले कलाकार बनाउँछ, हिट बनाउँछ भन्ने कदापि होइन। कुन बेला र कसरी गीत, कलाकार र श्रोताको सेतु कुन-कुन माध्यम बने भन्ने सम्झन खोजेको हुँ। यी माध्यमले निस्वार्थ सेतुको काम गरेका भए जुनसुकै नयाँ माध्यम आए पनि पुराना माध्यमको अर्थ र महत्व कायमै रहन्थे। तर बिडम्बना, हाम्रा सबै माध्यमलाई कुनै न कुनै रूपमा केही सञ्चारकर्मी र कलाकारले दुरुपयोग गरे। यसको भेउ बुद्धिमान श्रोता दर्शकले पाए। पत्याउन छाडे। फलस्वरूप, यो क्षेत्रको साख नै धरापमा पर्यो।
अब त न रेडियो नेपालमा गीत बजे ‘हिट’ हुने दिन छ, न एफएम, न टिभी। रेडियो र टिभीको संख्या नै यति धेरै भयो, कलाकारहरूलाई धाएर साध्य छैन, त्यसमध्ये अधिकांशमा बजेर अर्थ पनि छैन।
हरेक पुरानो माध्यमको औचित्य कम हुँदा नयाँ माध्यम सँगसँगै सुरू हुन्छ। अचेल कलाकार र श्रोताका लागि सबभन्दा सहज मध्यम युट्युब बनेको छ। प्राय: कलाकारले आफ्नै युट्युब च्यानल खोलेका छन्। न कसैको खुसामत गर्नुपर्यो, न रेडियो, टिभी धाउनुपर्यो, न अपहेलित महशुस गर्नुपर्यो। अब त युट्युबबाटै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल कलाकारको पिँढी नै खडा भइसक्यो।
माथि उल्लिखित रेडियो, एफएम र टिभी पुस्ताका कलाकारजस्तै अहिलेका चर्चित बिपुल क्षेत्री, नितेशजंग, स्वप्निल सुमन, स्वामी डी, सुशान्त केसी, केल्साङ श्रेष्ठ, ५५५ आदि सबैलाई हामीले 'युट्युब जेनरेसन' भन्दा गलत नहोला। यसो भनिरहँदा म सोच्छु, म कुन जेनरेसनको? रेडियो, टिभी, एफएम कि युट्युब?
मेरो जमानाका चलेका कलाकारहरूले समेत अब रेडियो र टिभीभन्दा युट्युबमा जोड दिन थालेको देख्दा समय परिवर्तन भएको महशुस हुन्छ। सोच्छु, हाम्रो पुस्ता साँच्चै थुप्रै विकासक्रमको संघार पार गरेको पुस्ता हो। अझै कति संघार पार गर्नुपर्ने हो, समयले बताउला।